GPS Navigation kuyinto INDLELA off - OLUHLAZIYIWEYO
umbuzo GPS Navigation kuyinto INDLELA off - OLUHLAZIYIWEYO
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 9 eyadlulayo #521 by Gh0stRider203
Ndiye ndaphawula ukuba Akwenzayo oku kudla isuntswana ngakumbi apha mva nje. Abazange phambi 2017 ......
Uyakwazi ukubona lwengoma ndimele ukuba uthatha, ngoko nje wasemantla, umkhondo yam DFW, uze umkhondo yam NGOKU ku LFRG, emantla YALOO.
Ndikwi- uzothini kutheni loo nto. Maxa wambi iyakuba aphaphazele kwingoma elifanelekileyo emva naphambili izihlandlo eziliqela ngokugqibeleleyo, kwaye ke kukho amaxesha nto ngathi NOPE! Asishumayeli .....
indiza My e DFW yayikufuphi ogqibeleleyo. ekunene enkqayini, kwaye izinga ekuhleni -.37 ft / umzuzwana kwi touchdown (ukuya phambili .... nomona lol)
Nabani uzuze nto?
Uhlobo lokugqibela: 1 unyaka we-9 inyanga edlulileyo Gh0stRider203.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #524 by Dariussssss
Kaloku, wena messed okuthile.
Ngaba silungise nantoni na malunga indlela, emva izinzile? Ndenjenjalo f kuni, FSX uya ukuchitha yonke isicwangciso moya, yaye ngokufuthi abuyise-moya ukuya yokuqala ndlela-point. Okanye, switsha kwi HDG imo endaweni GPS / FMC. Yiloo nto ndiyazijonga kwaye kabini khangela indlela okumele ukuba akukho zimpazamo okanye amanye amathuba crazy okanye nantoni na enjengale.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #526 by Gh0stRider203
lol nope. Andiqondi ukutshintsha into ngaphandle kokuba kufuneka batshintshele ukusuka VFR ukuba IFR ngenxa yokuba IFR indawo ngelo xesha, mna sele wadibana kwenqaba.
Andihlali nkebe FSX ngexesha kwezi moya elide. Na ezinye izinto, ezifana umdlalo World of iinqanawa (apho ndiya oyenzayo ngoku lol)
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #527 by Dariussssss
... kwafuneka ezimbalwa '' phezu ichibi '' moya, eneneni omnye elide kakhulu KPHX-LYBE kwaye ndiza ibala, kanye apho kufuneka. Andikwazanga ukwenza ukubhabha yonke ngexesha elinye, ngoko ke ndakwenza oko xa kukho iindawo ezimbalwa. Ezigciniweyo ngaxa lithile kwaye waqhubeka xa nibona ixesha elithile. Njengokuba benditshilo, ukuba ibala.
Ngaba kunokwenzeka ukuba uthumele ukuba isicwangciso yeflaythi? (FB okanye nge-imeyili) ndiza kuzama ukwenza oko. Yeyiphi inqwelo-moya usebenzisa kule omnye?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #528 by Gh0stRider203
ngokuqhelekileyo oku umba ......
Ndiya kwenza KDFW - LFRG kwi 747-400LCF ngenxa yokuba kuba kufutshane kuluhlu max, indlela ngokwanelisayo lula (xa ufika moya 12 lol), kwaye ngenxa yoko, ndenza imali kakhulu kuba VA lo moya .
Ndiye ifayile zip kunye nezicwangciso 3 ndisebenzisa apha.
KDFW - LFRG VFR ukuya moya 12 & 30, kunye IFR ukuba evulekile 30
Igama lefayile: KDFW-LFRG.zip
Befayile Yobungakanani: 2 KB
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #529 by Dariussssss
KULUNGILE. Ndiya kuyenza ezahlukeneyo kancinane, kunye 747ERF eqhelekileyo.
Kuyaqondakala yaye kuvakala engaqhelekanga kum ukwenza moya enjalo VFR ... mhlawumbi ke apho Lemposiso ... Ngenye indlela, ndiza kuzama phandle.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #531 by Gh0stRider203
99.999%-moya am VFR kunye KDFW - LFRG yeyona ndlela kuphela le ngxaki. Andiyithandi IFR. Ndithetha yintoni ingongoma ekwenzeni IFR e VFR imozulu, xa nje rhoxisa ezimel kunjalo emva ngexesha elinye?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #532 by Dariussssss
99.999%-moya zam IFR, kunye ATC, nangona ke okukruqulayo njengelabafileyo, kodwa ndenza konke okusemandleni am ukuba ibe sengqiqweni kangangoko kunokwenzeka.
Ukuza kuthi ga ngoku kakuhle kangaka, lo moya ilungile endleleni.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #533 by Gh0stRider203
Ndiya kwenza ukuba .... kodwa ungathanda ukulala Ndiya kunindulula nina dibanisa gqo kwiiyure
Kutheni I kubaleka kangaka? kuhle ukuba umntu .... Le nto lwakho mna ukuza kuthi ga ngo-Epreli.
Okwesibini, Ndim kuphela eziphaphazelayo ngoku ngenxa VA, kwaye kungoku nje neendleko zethu $ 961,250 kweentlawulo kokuqeshisa ngenyanga iintaka iibheji 2 (zombini i 777-200LR), kwaye $ 1,258,334 ngenyanga 2 iinqanawa (747 -800F).
Yinto phezulu kum ukuqinisekisa siya kumnika ngokwaneleyo nyanga nganye yokugubungela ukuba wenze i $ ezazifuneka ukuze ndihlawulele kubo off.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo - iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #534 by Gh0stRider203
I senza nje 300K NM nyanga iphelileyo, yaye uThixo uyazi iiyure ezininzi ngayo lol
Yinto mhlawumbi gonna phezulu umthetho ngenxa yakho. Oko akusoloko yona kum. Yinto random ngokupheleleyo
Ixesha ukwenza page: 0.470 imizuzwana